PSORISIS भनेको के हो? – Noor Health Life
PSORISIS भनेको के हो?
यो रोगमा छालाको सानो भाग सेतो र रातो रङको हुन्छ ।
हाम्रो छालाले मानव शरीरलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मानव छालामा तीन तहहरू हुन्छन् र सबैभन्दा बाहिरी तह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो छाला पानी, प्रोटिन र मिनरल्स सहित धेरै चीजहरू मिलेर बनेको हुन्छ। अरूको नजरमा आफूलाई सुन्दर बनाउन हामी आफ्नो छालाको विशेष ख्याल राख्छौं। हाम्रो समाजमा, खराब खानपान र दूषित पानीले धेरै छाला रोगहरू निम्त्याउँछ। सोरायसिस छालाको रोग मध्ये एक हो। यसलाई स्थानीय भाषामा psoriasis भनिन्छ। यो रोग शताब्दीयौं पुरानो हो।
पछिल्लो समय कमजोर पोषण र दूषित पानी मुख्य कारणहरू हुन्। यो रोग शरीरको एउटा भागबाट सुरु भएर पूरै शरीरमा फैलिन सक्छ। यो एक सामान्य छालाको रोग हो जसले छालाका कोशिकाहरूको आयु छोटो पार्छ, जसको कारण छालामा चाँडै बुढ्यौलीका संकेतहरू देखा पर्छन्, अर्थात् छालाका कोशिकाहरू आफ्नो सामान्य उमेरमा पुग्नुअघि नै भत्किन्छन्।
यो रोगमा छालाको थोरै भाग सेतो र रातो रङको हुन्छ, यस ठाउँमा कडा स्राव हुन्छ र जाडोमा यो चिलाउने धेरै पीडा हुन्छ। छालामा यी दागहरू स्क्र्याच गर्नबाट जोगिन महत्त्वपूर्ण छ किनकि अत्यधिक स्क्र्याचिंगले तिनीहरूलाई थप फैलाउन सक्छ।
सोरायसिस (सोरायसिस) ले शरीरको भागमा आफ्नो जरा फैलाउँछ र बलियो बनाउँछ जहाँ गोलाकार चिन्हहरू बन्छन्।
“उपचारको प्राथमिक लक्ष्य छाला कोशिकाहरूको द्रुत वृद्धिलाई सुस्त बनाउनु हो।”
यो एक सामान्य पुरानो रोग हो जसले छालालाई असर गर्छ। रोगको गम्भीरतामा, प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्केलहरू बनाइन्छ। गर्मीमा छाला सुख्खा नहुने हुनाले गर्मीमा सोरायसिसको गम्भीरता कम हुन्छ तर जाडोमा सुख्खापनले रोगको गम्भीरता बढाउँछ ।
(१) यी दागहरू शरीरमा स-साना दागको रूपमा देखा पर्छन् जुन थप खरोंचमा, ठूला दागहरू र सेतो रातो घाउ र घाउहरूमा परिणत हुन्छन्।
(२) छालामा रातो दागहरू जसमा पिपको स्राव जम्मा हुन्छ र सेतो तराजू बन्ने र झर्छ।
(३) छाला सुख्खा हुनु, चिलाउने कारणले घाउबाट रगत बग्नु ।
(४) चिलाउने, जलन र दुखाइ
(5 जोर्नीहरू कडा हुनु र सुन्निने
(६) नङमा दुखाइ र चोट, रङ्ग र पहेंलो हुनु।
सोरायसिस शरीरको कुनै पनि भागमा जस्तै हात, खुट्टा, घाँटी, कान पछाडि, टाउको र मुखमा र सम्पूर्ण शरीरमा पनि देखा पर्न सक्छ।
रोग को कारणहरु:
प्राय: सोरायसिसका दुई कारण हुन्छन्।
o… जीवविज्ञान, मानव आनुवंशिकी
o प्रतिरक्षा प्रणाली
सोरायसिस सामान्यतया पुस्ता देखि अर्को पुस्तामा सर्ने रोग मानिन्छ।
यो प्रतिरक्षा प्रणाली मा एक दोष को कारण पनि हुन सक्छ। विज्ञानले अहिलेसम्म यो रोगको पूर्ण रूपमा बुझिसकेको छैन, तर चिकित्सा विज्ञहरू यो रोग प्रतिरक्षा प्रणालीको टी कोशिका र सेतो कोशिकाको प्रकारको न्युट्रोफिल्स न्युटरफिल्ससँग सम्बन्धित रहेको विश्वास गर्छन्। शरीरमा प्रवेश गर्ने हानिकारक ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूबाट जोगाउन टी सेलहरू प्रयोग गरिन्छ।दश कोशिकाहरू बुझेर ‘आक्रमणकारी’ बन्छन्। र संक्रमण हटाउन वा घाउ निको पार्न आवश्यक छ भने, तिनीहरूले यसलाई नष्ट गर्न थाल्छन्। तसर्थ, प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसले ब्याक्टेरिया र भाइरल संक्रमणहरूबाट जोगाउँछ।
यो एक पुरानो रोग हो जुन संक्रामक छैन।
विभिन्न प्रकारका psoriasis
o “प्लाक सोरायसिस सबैभन्दा सामान्य प्रकार हो। यसमा छाला सुख्खा, रातो र खरायो, जसका कारण स्राव स्राव हुन्छ र छालामा जम्मा हुन्छ र छाला हट्छ। यसले छालामा देखिने दागहरूमा चिलाउने र दुखाइ निम्त्याउँछ।
o… नेल सोरायसिस यस प्रकारको सोरायसिसमा औँला र खुट्टाको नङ कुरुप, रंगहीन, पहेँलो, नरम र भंगुर हुने गर्दछ। प्रायजसो, रोग बढ्दै जाँदा, नङहरू भाँच्न थाल्छन्, जसले गर्दा गम्भीर पीडा हुन्छ। यस प्रकारको सोरायसिस पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी हुन्छ। यसले नङमा रगत प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउँछ र नङको जरा कमजोर बनाउँछ।
o सूर हेड / स्कल्पप्रोसिस
सोरायसिस टाउकोको विशेष भागमा वा सम्पूर्ण टाउकोमा हुन्छ। यो सामान्यतया रातो रंगको हुन्छ, तराजूले घेरिएको हुन्छ। कतिपय मानिसहरूमा यो खतरनाक स्तरमा पुग्न सक्छ, जसले गर्दा कपाल झर्न सक्छ।
o P संयुक्त सोरिसिस
सोरायसिस छालामा देखा पर्न सक्छ, तर यसले जोर्नीहरूमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। हात र खुट्टाको जोर्नी, औंलाको जोर्नी, कुहिनो र खुट्टाको जोर्नी नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । यसलाई acropustulosis psoriasis पनि भनिन्छ।
समयमै सोरायसिसको उपचार गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो एक पुरानो रोग हो जसले मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मृगौला फेल, कलेजोमा गर्मी, हृदय रोग र गठिया लगायत अन्य धेरै रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
सोरायसिसका रोगीहरूले आफ्नो शरीर र छालाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।छालालाई नरम राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
o ग सुख्खा साबुनबाट बच्नुहोस्।
o Vas दिनमा २ देखि ३ पटक भासेलिन प्रयोग गर्नुहोस्।
o ऊनी कपडा भन्दा सुती कपडालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
o ग एन्टिब्याक्टेरियल औषधि र साबुनबाट बच्नुहोस्।
बाथ रोगबाट बच्न दैनिक १० देखि १५ मिनेट घाममा बस्नुहोस्।
ओ… ट। चिया रुखको तेल-चियालाई चिलाउने समस्या नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
घरमै बसेर पनि यो समस्याबाट धेरै हदसम्म छुटकारा पाउन सकिन्छ।
-1 टी-ट्री तेल प्रयोग गर्नुपर्छ
2. एप्पल साइडर सिरका एक एन्टि ब्याक्टेरियल हो।
-3 काँचो मेवा।
काँचो मेवामा पाइने तत्वले संक्रमण निको पार्न मद्दत गर्छ ।
4. तरकारी र फलफूलको अधिकतम प्रयोग गर्नुहोस् र गाजरको जुस धेरै उपयोगी छ। यी सबै अवयवहरूले निर्जलीकरणको लागि क्षतिपूर्ति गरेर निर्जलीकरण रोक्न सक्छ र कलेजोबाट तातो पनि हटाउन सक्छ।
सोरायसिसबाट पीडित व्यक्तिले सकेसम्म स्वस्थ खाना खानुपर्छ।
रोगीले भुटेको खानेकुरा, मदिरा र टमाटर जस्ता खाद्य वस्तुहरूबाट टाढा रहनुपर्छ।
सोरायसिससँग आहारको कुनै सरोकार छैन तर राम्रो आहारले रोगलाई कम गर्न मद्दत गर्छ।
o खाना माछा, अण्डा, दूध, दही आदि प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खानुहोस्।
o = सुख्खा फलफूल सकेसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ ।
o * फलफूल, दूध, तरकारी र जुसको अधिकतम खपत धेरै उपयोगी छ।
(१) सुख्खापन हटाउन एलोभेरा जस्तो तत्व भएको स्याम्पु प्रयोग गर्न सकिन्छ।
(छालालाई नरम बनाउनका लागि सोडियम, ग्लिसरिन, साइट्रिक एसिड र मिथाइल सेलुलोज जस्ता सामग्रीहरू भएका साबुनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। Fluinolone Acetone 0.011 युक्त सबै तेलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।)
(3 लोशन र तेल जसमा सैलिसिलिकसिड हुन्छ टाउको र शरीरको लागि धेरै उपयोगी छ)।
छालालाई स्वस्थ राख्नको लागि आधारभूत नियम भनेको यसलाई सफा राख्न नियमित रूपमा धुनु हो तर सुख्खा साबुन प्रयोग नगर्नुहोस् (डाक्टरको सल्लाह बिना होइन) र छालाको आवश्यक चिस्यान र ग्रीस हटाउनको लागि धेरै न धुनुहोस्। र सकेसम्म धेरै मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नुहोस्। सकेसम्म तनावबाट जोगिनुहोस्। स्वस्थ आहार खानुहोस् र बिरामीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण पानी प्रयोग गर्नुहोस् र अत्यधिक घामबाट बच्नुहोस्। नूर हेल्थ लाइफबाट थप प्रश्न र उत्तरहरू प्राप्त गर्न इमेल गर्नुहोस्। र व्हाट्सएप। noormedlife@gmail.com